トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ General zanabola tamin'ny fotoana nindrana amin'ny mpanjifa bola vola
Na dia haingana famerenana sy nindrana ny mpanjifa no lafin-javatra ara-bola, raha tsy rehefa tsy nohofana, na koa ampiasaina ny mieritreritra fa rehefa miverina? Rehefa miverina ianao dia tsy maintsy mandoa ny
tsy liana ihany ny vola nindramina. Rehefa hisambotra vola amin'ny mpanjifa
fitantanam-bola, dia hampiditra momba ny toe-javatra misy zanabola, toy ny isan-karazany.
Tamin'ny fotoana ny mindrana avy amin'ny asa sy ny asa dia tsy mitovy ny tahan'ny miankina amin'ny
lenders vola, ny amin'izao fotoana izao sy ny fidiram-bola toy ny fibodoana ny antontan-taratasy ho an'ny famerenana, dia ho nanontaniana momba taona ny asa fanompoana.
dia mitovy ny zanabola amin'ny fibodoana sy ny asa, izay voalaza amin'izao andro izao, nefa tena mora ny manova mifanitsy amin'ny .3 iray etsy ambany.
asa tapa-potoana na ireo miasa ao amin'ny anjara
zanabola rehefa ny vahoakan '
asa tapa-potoana fa ny sasany kosa nankany nindrana, dia miovaova araka ny isan'ny taona no nanaovanao sy ny vola azo.
, izay tsy ela dia nanomboka mbola miasa mafy fironana hatao ho zava-somary avo zanabola. Raha toa ny taona maro hanohy ny
hanova amin'ny izay mitandrina ny fidiram-bola mitovy karazana, dia mety tsikaritrao fa Misambotra eo ambanin'ny toe-javatra izay tsy miova amin'ny mpiasa tsy tapaka.
fotsiny ny fiaraha-monina vaovao, na miova asa
izany no toetry ny fiaraha-monina vaovao, ary koa nanomboka niasa ho toy ny manontolo andro, matetika moa no nahita ambany.
Noho izany, indrindra izay napetraka mba hitombo zanabola.
tsy maintsy manao izany fa misy ny mety fa toy ny fisotroan-dronono na veloma tsy misy, dia hampihena ny fidiram-bola tafahoatra ny iray.
manontolo andro vehivavy mpikarakara tokantrano sy ny mpianatra
ny raharaha ny vehivavy mpikarakara tokantrano amin'ny fotoana feno sy ireo mpianatra, mba ho lasa raisina toy ny tsy an'asa, tsy mamela ny nindrana ny vola fitsipika araka ny amin'izao fotoana izao ny vola Mampisambotra Business Lal?na. Raha
mpianatra no nahazo vola ao amin'ny tapa-potoana, raha mpikarakara tokantrano dia ny hisambotra ny fankatoavan'ny vadiny, nalaina ny vola miditra ho toy ny boky zanabola atao kajy.
zanabola ny raharaha ny maro meloka taminay ny zanabola
maro no nanao ny mpitrosa dia matetika nindrana ny raharaha, izay nametraka ny efa ho ny fetra ambony minitra farany.
izany, farany ny ankamaroan 'ny antony mba manana atahorana ny niteraka ny trosa fanamafisana. Mihoatra ny mampisambotra ny
vola, toy ny mpanjifa ny vola mba hiroso amin'ny fandinihana ho any amin'ny faritry izay hatao namaly.
Noho izany antony izany, fa ny voninahitra zanabola avo dia ho an'ny olona ambany, dia manangana ny tombony lasa ny fanao.
Ankoatra izany, ao amin'ny fitantanam-bola antsoina hoe Machikin mpanjifa, misy omena sy ny fizahana manokana, nanatontosa ny findramam-bola amin'ny tranga maro izay meloka taminay.
Na izany aza, ny zanabola dia miavaka amin'ny zavatra maro teo amin'ny minitra farany, izay voafaritry ny lal?na. Nindramina mora
kosa, ny nindrana in Machikin, ka hoy ianareo: fa misy fitondran-tena mety, dia ho tsara kokoa fampiasana avy amin'ny heverina ampy na misy safidy hafa.
mampiavaka ny mpitarika mpanjifa bola
TV sy CM matetika mahita mpitarika mpanjifa bola sy ny toy izany. Misy ihany koa fa efa voatanisa ny sasany teo amin'ny
tahiry, fitantanana ny lehibe kokoa vola, anisan'izany an-drenivohitra no mampiavaka.
ho amin'izany, na ny raharaha fa na dia ny ambany indrindra zanabola tsy miova amin'ny banky, orinasa ihany koa dia manohana tsara dia na maro ho hamaly. Ao amin'ny
ireo nahay ny kanto, ny zavatra tsara tarehy koa dia ahitana fa ianao no amiko, ary aseho ho toy ny drafitra mialoha ny nindrana fomba izay tiany anao.
sy vehivavy-bola ihany no fakan-tahaka, misy zanabola fampielezan-kevitra.
? Ny vehivavy-bola ihany no vehivavy
-bola ihany, dia drafitra, izay teny amin'ireo fiheverana fa sonia an-dalambe ho an'ny vehivavy io anarana io.
isan-taona ny vola miditra dia ho an'ny ambany mora ny vehivavy raha ampitahaina amin'ny lehilahy, ny endri-javatra toy izany dia lasa mora ny hiverina amin'ny zanabola ambany dia ambany. Taratasy avy amin '
an-telefaonina, toy ny rehetra koa ho atao amin'ny vehivavy, satria misy ihany koa ny fahatsapana ny fiarovana.
? volana voalohany hamaly zanabola 0 drafitra
drafitra izay dia atao hoe tsy haka vola fanampiny havaly raha toa ka ao anatin'ny fe-potoana iray ihany koa nindramina niseho.
Izany no zava- = liana mba hisambotra -bola fanahiana, mba hanesorana ny endrik '. Raha jerena ankapobeny ny
no ho ny fampiasana ny voaloham-mindrana tamin'izany fotoana izany ihany, fa, tena mila vola, dia tokony hanampy rehefa antsoina. Raha toa ka misy ny fanantenana izay azo havaly ao anatin'ny vanim-potoana
, dia mety ho safidy.
mpanjifa ihany koa ny fitantanam-bola dia miankina amin'ny asa sy ny asa.
Na izany aza, na dia amin'ny asa toy ny tapa-potoana sy ny asa tapa-potoana, ka isika ka azo antoka ihany koa ny ela ny halavan'ny-panompoana, dia matetika amin'ny alalan'ny fandinihana tahan'ny na dia ambany.
Indrindra indrindra, ny lohan'ny mpanjifa ara-bola, ary koa fampindramam-bola any amin'ny banky, dia mety ho afaka ampiasaina amin'ny hampihena ny zanabola.
Mazava ho azy fa misy ny fandinihana ny bola vaovao, fa ianao ho nindrana raha mahay mifidy ny tsara indrindra ho at? amiko izy ny amin'ny drafitra isan-karazany, raha nanatanteraka ny fampiharana voalohany.